Daawo: Khilaafkii Dani iyo Xildhibaan Daad oo waji kale yeeshay iyo Xildhibaanno si kulul uga hadlay – Hornafrik Media Network
Daawo: Khilaafkii Dani iyo Xildhibaan Daad oo waji kale yeeshay iyo Xildhibaanno si kulul uga hadlay
By Liibaan Nuur	 On Nov 2, 2019
Xildhibaanadii shalay magaalada Qardho ugu tagay Madaxweynha Puntland Saciid Cabdullahi Dani ee dhambaalka raali galinta ah uga waday xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa iyaga oo careysan mar kale caawa ka soo muuqday Warbaahinta.
Xildhibaanada oo gaarayay ku dhawaad 20 mudane oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka Mudug ayaa sheegay in xildhibaan Daad uu ku kacay fal kale oo aysan isku ogeyn, iyagoo ku eedeeyay abaabulkii maanta ee baarlamaanka Puntland uu ku laalay codsigii xeer ilaalinta ee xasaanad ka daadista oo ay la laabatay xeer ilaalintu inta aan codka loo qaadin, isla markaana uu maanta hadal xanaf leh mar kale ka jeediyay kulankii golaha.
Xildhibaanadu waxay sheegeen in ay Madaxweyne Dani ka raali galinayeen in mar kale uu xildhibaan Cawil Daad ku kacay wax aan u haboonayn sida ay sheegeen maslaxadda, isla markaana ay kala balameen in aysan soo laaban.
Markii ay Madaxweynaha ugu tagayee Qardho ayey sheegeen in uu u wakiishay xildhibaan Daad oo ay isku deegaan doorasho yihiin, isagoo ka sagootiyay magaalada Gaalkacyo oo ay ka baxeen, siiyayna gaarigiisa si ay ugu tagaan Qardho.
Halkaan ka Daawo Xildhibaanada oo arintaas ka hadlaya
Dagaal u dhaxeeya guddoomiha Balcad iyo sarkaal ka tirsan Hir-Shabeelle oo ka dhacay duleedka Muqdisho